news Pattaya Mail, 06 Dec 2013 (7 years ago )
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့သည်ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်ဘောတူညီထားခဲ့ပြီ၎င်းကိုအေကာင်အထည်ဖော်ရာ၌ ရပ်ဆိုင်းထားသောအီတာလီယာန်-ထိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီနေရာတွင်အစားထိုးရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသစ်များရှာဖွေလာသည်။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အာဏာပိုင...
news Irrawaddy News, 25 Feb 2014 (7 years ago )
Members of the Parliament Committee on National Race Affairs and Internal Peacemaking (CNRAIP) have called on President Thein Sein’s government to let lawmakers participate in Burma’s ongoing peace process. The CNRAIP members met with Vice President Sai Mauk Kham, who heads the Union Peacemaking ...
Two primary schools in Taninthayi Region through Japan’s GGP
The Government of Japan, under its Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects (GGP) Scheme, has extended the assistance totaling US$ 231,162 in 2012 for two humanitarian assistance programs entitled: “The Project for Construction of Myeik Taung Basic Education Post Primary School in My...
ကီၢ်ယပၣ် GGP တၢ်တိာ်ကျဲၤအဖီလာ်တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဝဲတီၤဖုၣ်ကၠိခံဖျၢၣ်ဖဲတနီသရံၣ်ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ
ကီၢ်ယပၣ်ပဒိၣ်,လၢအတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်(GGP)အဖီလာ်,မၤအါထီၣ်ဝဲစ့ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ၂၃၁,၁၆၂ ဒီလၣ်ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်အတီၢ်ပူၤလၢတၢ်ဆီၣ် ထွဲမၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံခါအဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်- (Myeik Taung Basic Education Post Primary School) ဆူညါခီတီၤခၢၣ်သးကၠိဖဲဘျံးကီၢ်ဆၣ်,တနီသရံၣ်ဟီၣ်ကဝီၤအ...
news Irrawaddy News, 28 Feb 2014 (7 years ago )
Ethnic activists have openedastudy and research center in Chiang Mai, northern Thailand, that will help ethnic armed groups, NGOs and political parties gainabetter understanding of Burma’s ongoing peace process and support the ethnic groups as they negotiate with the government. The center, c...
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်တွင်အတတ်ပညာနှင့်သုတေသနပြုစင်တာကိုတိုင်းရင်းသားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒနှင့်အညီဖွှင့်လှစ်လိုက်ပြီး၎င်းစင် တာသည်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊အဲန်ဂျီအိုများနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှေ့ဆက်သွားနေသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှု များတွင်ပိုမိုကောင...
news Democratic Voice of Burma, 28 Feb 2014 (7 years ago )
မြန်မာပြည်အစိုးရမှညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများပျက်စီးမှုများနှင့်လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားပြုမှုများလျော့ကျလာကြောင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှအင်္ဂါနေ့လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာတွင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တိုးတက်မှုများရှိသောလည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်​ရှား​မှု​ကြောင့်​...
news kren news, 20 Feb 2014 (7 years ago )
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူးပလာခရိုင်၌သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမည့်စာရင်းကောက်သူများကိုဒေသခံကျောင်း ဆရာမများအားသုံးရန်ကရင်ပြည်နယ်သန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီသို့တောင်းဆိုထားသည်ဟုကေအဲန်ယူဘက်ကပြောဆိုသည်။ ၎င်းတောင်းဆိုမှုကိုကရင်ပြည်နယ်၊ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ဖေဖော်ဝါရီဒုတိယအပတ်၌ပြည်...
news RFA, 05 Mar 2014 (7 years ago )
မြန်မာပြည်တွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်လာသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနောက်ပိုင်း၌အရပ်သားပုံစံတဝက်ပါသောသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်အာဏာရလာပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလုပ်လာသည့်နောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေကိုမြန်မာလွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်သည်။ သို့...
news The New Light of Myanmar, 11 Mar 2014 (7 years ago )
The Government of Japan, under its Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects (GGP) Scheme, has extended the assistance totaling US $ 220, 439 for two humanitarian assistance programs. The hand-over and opening ceremonies of the monastic primary school building in Mon State and the ...